अझै हटेन राजनैतिक अन्यौलताकाठमाडौँ । देशमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमहरूले केही सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको जस्तो देखिए पनि नेपाली राजनैतिक आकासमा मडारिएको कालो बादल अझै हट्न सकेको छैन । देशमा राजनैतिक अन्यौलता अझै पनि कायम छ । आगामी माघ ७ गतेभित्र तिनै तहको निर्वाचन गरी सक्नु पर्ने बाध्यात्मक समय सीमा संविधानले नै तोकी दिएको छ । तर सरकारले प्रदेश र केन्द्र निर्वाचनको मिति अझै तोक्न सकेको छैन । बाँकी...»
डा. केसीका मागप्रति राजमोको समर्थनकाठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी सरकारको गैर जिम्मेवारपूर्ण नीतिकै कारण बारम्बार अनसन बस्नु परेको बताएको छ । गतकालमा सरकारले डा. केसीका मागहरू पुरा गर्न बारम्बार सम्झौता गर्ने गरेको तर ती सम्झौताहरूप्रति सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको स्पष्ट पार्दै राजमोले सरकारको त्यस प्रकारको उपेक्षा नीतिको कडा आलोचना गरेको छ । बाँकी...»
राप्रपाले समर्थन फिर्ता लियो
काठमाडौँ । पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । पार्टी फुटपछि पहिलो पटक बसेको राप्रपा बैठकले देउवा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
नेपाली महिला अवैध रूपमा खाडी पुग्दैकाठमाडौँ । नेपाली महिलाहरू रोजगारी खोज्दै गर्दा अवैध रूपमा खाडी मुलुक पुगेको पाइएको छ । खाडी मुलुकमा अवैध ढङ्गले पुर्‍याइएका ती घरेलु कामदारमध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थल र बाँकी भारत, श्रीलङ्का, चीन र अन्य अफ्रिकी मुलुक हुँदै खाडी मुलुक पुग्ने गर्दछन् । बाँकी...»
उपचार नहुँदा सुत्केरीको ज्यान गयो
डडेल्धुरा । डडेल्धुराको भित्री मधेश क्षेत्रको परशुराम नगरपालिकामा २०७४ साउन २३ गते एक सुत्केरीको समयमा उपचार नहुँदा बाटोमै मृत्यु भएको जोगबुढा प्रहरीले जनाएको छ । साउन २२ गते बेलुका सुत्केरी व्यथा लागेर जोगबुढा अस्पताल पुर्‍याइएकी २१ वर्षीया पुष्पादेवी जोशीको धनगढी लैजाने क्रममा बाटोमा नै मृत्यु भएको उनका आफन्तले जनाएका छन् ।